Bentley I-model, isdhexgalka iyada oo loo marayo ODBC - Geofumadas
Nofeembar, 2011 Microstation-Bentley
I-model waa soo jeedinta Bentley ee ah in la soo bandhigo soo bandhigida feylasha dgn, iyadoo ay suurta gal tahay in la falanqeeyo, lala tashado lana muujiyo xml gundhigga ah. In kasta oo ay jiraan waxyaabo laxiriira la falgalka AutoDesk Revit iyo iPad, waxaa laga yaabaa in shaqooyinka loo abuuray akhristayaasha pdf iyo Windows 7 sahmiyaha ugu cadcad marxaladan cusub.
Si aad u soo dejiso sheybaaradan, waa inaad tagtaa barnaamijyada 'Bentley Systems iWare' ee loogu talagalay bogga isdhexgalka. Waa lagama maarmaan inaad yeelato koontada Bentley SELECT, haddii aadan lahayn, waad diiwaangelisaa ama weydiisataa inay xusuustaan ​​lambarka sirta ah ee emaylkaaga. Codsiga soo dejinta waxaa loo yaqaan 'i-model ODBC Driver-ka Windows 7, waxaa jira wadayaal kale oo isla meesha jooga, qaarna nooca beta.
I-model waa faylka dgn, taas oo ahayd oo ay soo saartay codsi kasta oo Bentley ah (Microstation, Map Bentley, Geopak, iwm.), Oo leh nooc kala duwan in la haysto shaygiisa la xidhiidha nambarada xml, si loo akhriyo loona falanqeeyo barnaamijyada isticmaalka guud, sida database, Excel, Outlook, oo ay ku jiraan Windows Explorer 7.
Ma aha dhammaan Bentley tarjumeyaashu waxay abuuri karaan I-model, marka laga hadlayo khadadka geospatial, way sameyn kartaa Bentley Map, laakiin maya Bentley Power View.
Aan aragno kiiskan, sida helitaanka I-model-ka wuxuu u shaqeeyaa mashiinka ODBC
Abuuritaanka ODBC laga bilaabo Windows 7
Midkoodna midna uma jiro noocyada kahor Windows 7, laga bilaabo hadda waxaa jira 32 iyo 64 jajab. Marka rakibayaasha la soo dejiyo, taas oo ku xidhan nooca ugu dambeeya ee uu leeyahay magac sida dodd01000007en.msi waa la fuliyaa oo diyaar ah:
Markaad marinayso Gudiga Xakamaynta, qalabka maamulka iyo ilaha xogta ODBC waxaa la arkaa inay durba suurtagal tahay in la abuuro mid cusub oo u adeega buundo lagu akhriyo I-moodooyinka. Halkan waxaad ku qeexaysaa magaca marin u helka, sharaxaadda iyo galka ay ku jiraan faylasha dgn.
Marka la sameeyo ODBC, waxaa laga heli karaa Access, Excel, SAP Crystal Reports, oo laga helo VBA ama wixii kale ee xog ururin ah oo taageera ODBC. Tani waa, ficil ahaan, guuritaanka dhaqanka mslink, oo Bentley kaliya fahmay, xfm node oo gundhig u ah xml node oo ah dgn fudud oo la yiraahdo I-model. Waxyaabaha adag ee ku saabsan sameynta codsiyada Bentley, ayaa ah iyada oo aan laga sameynin VBA waxay adkaysay in la falanqeeyo dgn, maadaama aad si dhib leh u arki lahayd mslink iyo xogta aasaasiga ah ee loo dhoofiyo miiska isku xirka.
Marka laga hadlayo Excel
Si aad tan u hesho, laga bilaabo miiska Xogta, dooro Laga soo bilaabo ilaha kaleka dibna Laga soo bilaabo Wizard Data Link Connection, ODBC DSN ka dibna I-hababka ilaha xogta.
Fiiri in mar la doorto feylka dgn, waxaa loo arki karaa inay tahay xog-ururin, dhammaan walxaha halkaas ku jira. Yaab, haddii aan xusuusanno taas bilowgii XFM wuxuu ahaa mid aad u xanuun badan.
Xogta waxay ku imaaneysaa unugyo kala duwan oo lagu qeexi karo geedi socodka. Gudaha Excel, waxaad ku sameyn kartaa howlaha lagama maarmaanka ah ee ay kuu ogolaato.
Haddii aan ka sameyno Access
Laga soo bilaabo Access waxaad sameyn kartaa wax badan, ma aha oo kaliya inay soo dejiyaan; haddii aanu kaliya danaynayno inaynu isku xirno sida miiska dibadda:
Gudaha Qalabka Jadwalkawaan doorannay Macluumaadka Dibeddaka dibna More, Macluumaadka ODBC. Halkan waxaan ku go'aansaneynaa Isku xirka ilaha xogta adoo abuuraya miis la isku xidhan yahay oo waxaa jira, dgn oo ka muuqda Access.
Halkan waxaa suurtagal ah in lagu lifaaqo saldhig kale, sida, tusaale ahaan, xirmooyinka khariidada illaa saldhigga diiwaangelinta canshuuraha. Tani waxay haysaa xiriir toos ah oo u dhexeeya khariidada iyo salka, ka dib heerarka sharafta, warbixinnada, iwm.
Laga soo bilaabo SAP Crystal Reports
Abuur cusub, adoo isticmaalaya Wizard Warbixinta, Standard, ODBC (ADO), Bentley I-model. Kadib feylka dgn ayaa la xushay, galka ay ODBC nagu amartay.
Taasi fudud (si fiican, ma aha wax badan)
Waxa kale oo jira tusaale mashruuc ADO.NET ah oo ku jira C # oo lala shaqeyn karo Visual Studio 2008, iyo halka lagu muujiyey sida horumarku u shaqeeyo codsi la falgalaya I-modelka oo loo maro ODBC. Tani, waxay kuxirantahay rakibideena, waa in lagu keydiyaa wadada:
Waxaan u maleynayaa inay tahay talaabo muhiim ah Bentley, si loogu soo dhoweeyo dgn qofka isticmaala. Xaaladdan oo kale, waxay ka dhigeysaa faylka dgn / dwg mid loo akhrin karo xog ahaan; kaas oo albaabka u furaya inuu joojiyo inuu u arko inuu yahay feylal vector oo uu la falgeli karo isagoo ku xiraya keydka keydka kale ee ay adeegsadaan barnaamijyada kale
Post Previous" Hore Geobide, isdhexgalka xogta OGC
Post Next Mowduucyada Congresska ee baadhitaanka GuatemalaNext »